एप्पल यहाँबाट यसको नक्साका लागि ईन्जिनियरहरू भर्ती गर्न सक्दछ आईफोन समाचार
एप्पल यहाँबाट ईन्जिनियरहरू भर्ना गर्न सक्दछ, जीपीएस नक्शा नोकिया बेचि
मैले स्वीकार्नु पर्दछ कि यद्यपि यी अहिलेका लागि केवल १००% अपुष्ट अफवाहहरू हुन्, म यो समाचार सुन्न पाउँदा खुशी भए: लिंक्डइनमा भर्खरका अद्यावधिक जानकारी अनुसार, एप्पल यहाँबाट ईन्जिनियरहरू भाडामा लिन सक्दछ, GPS सफ्टवेयर जुन हाल यहाँ WeGo भनिन्छ र यो धेरै वर्ष अघि नोकियाको स्वामित्वमा थियो। म यस समाचारसँग आंशिक रूपमा खुसी छु किनकि म नोकिया नक्साको सन्तुष्ट उपयोगकर्ता हुँ र यहाँ WeGo जीपीएस सफ्टवेयरको साथ छ अफलाइन नक्साहरू जुन म आज प्रयोग गर्छु।
यो Bussiness Insider जो थियो रिपोर्ट गरियो कि एप्पल थियो यहाँबाट छ जना ईन्जिनियरहरू भाडामा लिए पछिल्ला महिना / बर्षमा। यो हस्ताक्षर बर्लिनमा छ जस्तो देखिन्छ जहाँ एप्पलसँग एप्पल कारको अफवाह फैलिन थालेको क्षेत्र भन्दा बाहिर केही छैन। जर्मनीबाट केही कम्पनीले नोकियाबाट यहाँ नक्सा किनेका थिए किनभने तिनीहरू अडी र बीएमडब्ल्यू हुन्।
एप्पलले यहाँबाट इञ्जिनियरहरूलाई काममा लिन्छ?
छ जना ईन्जिनियरहरू एप्पलले यहाँबाट भाडामा लिएका हुन्:
खंग ट्रान - वरिष्ठ सफ्टवेयर ईन्जिनियर। उनलाई यो महिना सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा एप्पलले काममा लिएका थिए।
Konstantin Sinitsyn - वरिष्ठ सफ्टवेयर ईन्जिनियर। नोभेम्बरदेखि उनी कपर्टिनो टोलीमा रहेका छन्।
मानफ्रेड रिख - पूर्वी यूरोप को सामग्री र क्षेत्रीय नक्शा को नेता। उनी २०१ 2015 जुलाईमा एप्पलमा सामेल भए र एप्पल नक्शामा पहिले नै काम गरिरहेका छन्।
गिल्बर्ट शुल्ज - अप्रिलमा एप्पलमा सामेल हुने प्रोग्राम निर्देशक। उहाँ पहिले नै एप्पल नक्शा टीममा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
Torsten Krenz - निर्देशक जसले at० महिना भन्दा बढि यहाँ काम गरे। उनी २०१ Apple मा हस्ताक्षर भएदेखि एप्पल नक्शामा पनि काम गर्दै आएका छन्।
एन्ड्रे अर्सेन्टिएभ - उत्पादन प्रबन्धक। उहाँ २०१ 2015 मेमा एप्पलमा सामेल हुनुभयो र उनीहरूको नक्सा टोलीमा पनि काम गर्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा, जस्तो कि मैले अवसरमा भनें, मलाई लाग्छ एप्पल नक्शा राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। वास्तबमा, एप्पलले टमटमसँग साझेदारी गरी त्यसैले यो थियो। मुख्य समस्या जुन हामी एप्पल नक्शाको साथ फेला पार्छौं खोजी प्रणाली हो जुन मरुभूमिमा बालुवा पाउन लड्न सक्छ। एकचोटि हामीले हाम्रो गन्तव्य फेला पार्‍यौं भने, नक्साले मर्यादित व्यवहार गर्दछ, कम्तिमा मैले तिनीहरूलाई प्रयोग गरिसके पछि।
अर्कोतर्फ, यो कुनै गोप्य कुरा पनि छैन कि व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि अन्य कम्पनीले जस्तै उनीहरूको मुख्यालय भएको ठाउँमा पहिलो प्रयासमा केन्द्रित छ, त्यसैले उनीहरूको नक्सा संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसारका कुनै पनि देश भन्दा उत्तम छ। यो देख्न बाँकी छ कि यदि यी हस्ताक्षरहरू यहाँबाट यूरोपमा एप्पल नक्शा सुधार गर्न प्रबन्ध गर्दछ र किन होइन? खोज प्रणाली त्यसले हामीलाई अनौंठो टाउको दुख्यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पल यहाँबाट ईन्जिनियरहरू भर्ना गर्न सक्दछ, जीपीएस नक्शा नोकिया बेचि
पेबलले घोषणा गर्‍यो कि उपलब्ध घडीहरूले कार्य गर्न जारी राख्छ
याहूले इतिहासको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो ह्याक प्राप्त गर्दछ